Nzira yekugadzira multiboot pendrive: nhanho nedanho gwaro | Kubva kuLinux
Multisystem uye inobvumira mu rarama USB have akasiyana Linux kugoverwa hapana chikonzero chekuisa chero chinhu paPC. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuisa yakawanda shanduro dzeLinux sezvo paine nzvimbo pane iyo pendrive uye iwe uchave unokwanisa sarudza iyo yekutanga sisitimu kubva kumifananidzo yakajeka ye GRUB 2.
Kuisa chirongwa ichi, ingo tevera rairo dziri papeji rayo (http://liveusb.info), kana iwe uine Ubuntu unogona kurodha pasi iyo yekumisikidza script seinotevera:
Ini ndakaburitsa faira rakadzingwa.
tar -xvf yekuisa-depot-multisystem.sh.tar.bz2
Mhanya iyo yekuisa faira:
Ivo vane mamwe ma distros vanogona kutevera iyi imwe yekuisa bhuku.
Zvinoitwa neiyi kuwedzera chishandiso chekushandisa uye nekuisa zvese zvinoenderana, pakati pavo, gadza iyo chaiyo muchina qemu, nezvimwe.
Chinangwa che qemu ndechekugona kuyedza usb boot system pasina kutanga komputa neUSB yakabatana.
Sezvauri kuona, chirongwa ichi chinokutendera iwe kugadzirisa iyo boot menyu, fomati iyo USB memory, kurodha yakakurumbira ISOs, nezvimwe.
Mhedzisiro yekupedzisira, kana uchitangazve komputa nependrive munzvimbo:
GRUB 2 menyu ine ese distros akaiswa pane iyo pendrive
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekugadzira multiboot pendrive: nhanho nedanho gwara
Multiboot, inoshanda kune ese linux, kunyangwe iri nyore kuita haina graphical kana KISS, ivo vangonditumira iyo Multisystem link kubva kune yako ubuntu ISO kushandisa Multisystem kubva ku virtualbox - ndinofunga zvichafambawo zvakanaka neQemu.
Isaya Gätjens M akadaro
Ini ndakakwanisa kuisa iyo Ubuntu neWindows XP yekumisikidza pane imwechete pendrive, kunyangwe pakutanga kana kubhootisa neye pendrive kuri kukanganisa zvishoma nemenu, kuongorora zvishoma uye nekuyedza uye kukanganisa imwe inojaira uye inoshanda chaizvo
Pindura kuna Isaías Gätjens M
wget haiwani iyo faira kurodha pasi, ndinokusiira iyo inodzosera iyo koni
Kugadzirisa liveusb.info… 92.243.9.215
Kubatanidza ku liveusb.info | 92.243.9.215 |: 80… kwakabatana.
Chikumbiro cheHTTP chakatumirwa, chakamirira mhinduro… 404 Haina Kuwanikwa
2011-11-24 17:52:04 Kanganiso 404: Haina Kuwanikwa.
Pasina chinangwa chekupopera, ini ndoda kudzokorora chinyorwa chandakaisa pamasaiti akati wandei, nekuti ini ndinoona kuti vanhu vakaomarara nechishandiso ichi chiri nyore kushandisa uye chine simba kwazvo. Ini handikwanise kunyatsonzwisisa mashandisirwo azvo zvakare
Kutanga, IZVO ZVINONYANYA KUKWANISA: HAUFANIRI KUTI USHURE MultiSystem IN YAKO DISTANCE.
Ini ndichaedza kupfupisa maitiro andinozviita (inoshanda system yechero distro, kunyangwe ye winbug $):
1 Ini ndinotora iyo MultiSystem iso kubva pane iyi link:
2 Ndinoiisa mupeniki (A) ine rairo dd, unetbootin, chero chaunoda.
Shandisa pendrive yeinenge 8 GB (Ini ndinoshandisa 16 GB, mazuva ano ivo vakachipa kwazvo), iyo yakakura peni, iyo yakawanda distros ivo vanozokwana uye nekunakidzwa kwavachave nako.
3 Ini ndinotangisa iyo MultiSystem penlive (A) kubva pc, (ini ndinodzokorora, kanenge 8 GB).
4 Ini ndinoisa imwe pendrive (B) yakamisikidzwa muFAT 32 (kunyangwe MultiSystem ichigona zvakare kuimisa) uye chinhu chekutanga chandinoita kuisa iyo MultiSystem iso kusvika (B).
5 Zvino, kubva peni A kana B ini ndinowedzera isos yemastros kubva kune imwe kuenda kune imwe.
Mukupedzisira, isu hatina imwe, asi maviri akawanda-rekodhi mapeni. Uye imwe neimwe yadzo inodzosera penlives jenareta, iine iyo MultiSystem iso mune yega yega.
Iye zvino iwe unongoda imwe chete yemapeni, dhisiki kana pendrive ine isos yedistros (kunyangwe iko kushandiswa kuri kukwanisa kukubatanidza kuti utore distros zviri nani kuzvitakura) uye iwe unogona kuenda uchitenderera uchigadzira mapeni kune wese munhu 🙂
Rondedzero yeanotsigirwa distros yakakura:
Ehezve, kana iyo nyowani vhezheni ye distro (Debian 7.5, Ubuntu 14, Mint 17) ikabuda, iwe unofanirwa kudzima iyo yekare vhezheni (Debian 7, Ubuntu 13, Mint 16) woisa iyo nyowani peni.
Zano: Usasanganise pane imwechete penlive yakagadzirwa neMultisystem GNU / Linux distros uye winbug $ kuisa hupenyu. Kune yega yega sisitimu yekushandisa, imwe penlive.
Kana iwe uchikwanisa kuisa chero chinokunda chishandiso, semuenzaniso antivirus (Kaspersky live) mupeni ine GNULinux distros, ini ndakayedza izvo uye zvinoshanda.
Uye kana matambudziko akaramba, edza imwe peni-yemamwe mabhureki uye saizi.
Izvi ndizvo zvinotaurwa nemumwe munhu akagadzira chaiwo mapeneti mazhinji neMultisystem anokuudza.
Ndakaedza kurarama uye ndakaisa akawanda ma distros neichi chishandiso pasina dambudziko.
Ini ndashandisa live mode distros yakagadzirwa neMultisystem kwete kwemaawa, asi kwemavhiki pane pc isina hard drive, pasina dambudziko.
Unyengeri: iwe unogona kugadzira imwe yeanoramba aripo, asi HERE imwe chete penlive, uye kuti kana tikasiya nzvimbo yakaringana yacho (ini ndinokurudzira padiki pe1 GB, kuti ndikwanise kugadzirisa zvirongwa uye chengeta mafaera pane iyo distro).
Chinhu chega icho MultiSystem isingatsigire kuvandudza iyo sisitimu yese.
Ehe, iwe unogona kuisa / kusunungura mitauro uye zvirongwa, wedzera zvinowedzerwa kubrowser, chengetedza mafaera munzvimbo iyoyo yakachengeterwa iyo inoramba ichingobatira distro, nezvimwe. Asi HAUYE kuyedza kupa inoramba iine distro kukodzera kugadzirisa kana pacman -Syu.
Ndinovimba ndazvitsanangura mushe.
Asi ini ndinokuvimbisa kuti ndanga ndichishandisa MultiSystem kwenguva yakareba pasina matambudziko.
Ini ndinokurudzira kune vapepeti vesaiti ino kuti vaite zvakadzama chinyorwa pane ichi chishandiso kamwe, nekuti chakakodzera icho.
Kunyange iwe uchigona kuverenga ichi chakazara kwazvo posvo nezve MultiSystem:
pakupedzisira mumwe munhu anojekesa izvo isu tese zvatinofanirwa kuziva !!!!, kuti panogona kungova neIMWE distro nekushingirira kune imwe neimwe penlive, HAPANA ANOGONA kujekesa kuti, ndosaka ini ndisingakwanise kupa kushingirira kune yangu debian live usb, nekuti yatove nayo linux mint 17. Ndiri kuzochinja mabasa acho, ndiri kuzobvisa kushingirira kubva ku linuxmint ndoipa kuna debian
Pindura kune madhimoni
Ndatenda x 100000.
Unogamuchirwa! Ndiri kufara kuti zvinobatsira.
Mhoroi, ndasvika padanho randinoda kuisa iyo yekuuraya faira, asi zvinondipa kukanganisa:
[sudo] pasiwedhi ye lilian:
sudo: ./install-depot-multiboot.sh: raira haina kuwanikwa
bash: ./install-depot-multiboot.sh: Faira kana dhairekitori haripo
Kutanga ndakaedza Sudo ndikazoita pasina, hazvina kushanda chero nzira.
Pane mumwe munhu anganditungamira ndapota? Ndatenda
Gadzirisa kuparara kana uchirodha menyu yekushandisa muXfce